योगमाया प्रवेशद्वारको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना — KhabarTweet::Nepali online news portal योगमाया प्रवेशद्वारको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना — KhabarTweet
भोजपुर- भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका- १ नेपालेडाँडामा निर्मित योगमाया प्रवेश द्वारको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ । २ दिन अघि स्थानिय भुपाल वस्नेतले अस्वाभाविक जस्तो देखिने नवनिर्मित गेटको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा गेटको तस्वीर पोष्ट गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको हो ।
भखैरै निर्माण सम्पन्न भएको जस्तो देखिने गेटको वनावट अस्वाभाविक देखिएपछि फेसवुक कमेण्टवाटै गेटको चर्को आलोचना भएको छ । कमेण्टमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु गेटको डिजाईन, निर्माणका साथै समग्र षडानन्द नगरपालिकाको विकास अपेक्षाकृत नभईरहेको भन्ने कुरामा समेत सांकेतिक रुपमा चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
गुरु प्रसाद राई नामका फेसवुक प्रयोगकर्ताले विकासले संमृद्धि मात्र होइन स्वर्गनै पुराउने जस्तो पो छाँटकाँट देखियो त हौ षनपाको भनेर सांकेतिक रुपमा व्यंग गरेकाछन् ।
अर्का फेसवुक प्रयोग कर्ता जिवत साम्देनले गेटको डिजाइन र फिनिशिङ हेर्दा चार लाख मात्र हैन चार करोड ले नी पुगेन होला कठै हेर हेर। यो गेट बनाउने व्यक्ति वा निर्माण व्यवसायी जो होस चार लाख भुक्तानी दिने हैन १० १५ लाख जरिवाना गरेर कालो सूचीमा राख्नु पर्छ। भनेर कमेण्ट गरेकाछन् ।
त्यस्तै अर्का फेसवुक प्रयोग कर्ता जेसी भेषराज भट्टराईले ४ लाखमा गेट बनाउनु भन्दा त वडामा बत्ति बाल्न बल्ब, तारहरु,मिटर बक्स किन्न नसक्नेलाइ सहयोग गरेको भए धेरै मनहरु खुसि हुने थिए । प्रवेश ढोका आवश्यकता होला तर प्राथमिकता हैन ।
तस्विरमा यो समाचार तयार पार्दा सम्म १ सय ५६ कमेण्ट र १४५ रिएक्ट आएकाछन् । अधिकांस कमेण्ट गाउँ छोडेर देश परदेशमा रहेका वडाका वासिन्दाले गाउँको विकासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै गरेकाछन् भने कतिपय हाँसि मजाकमा पनि कमेण्ट गरेकाछन् ।
पर्यटन मन्त्रालयको बजेटमा आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को ४ लाख बजेटवाट गेट निर्माण भएको वडाध्यक्ष रामेश्वर भण्डारीले खवरट्वीटलाई जनाकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय भोजपुरलाई बजेट पठाईदिएपछि पुर्वाधार कार्यालय सँगको समन्वयमा योगमाया प्रतिष्ठानले गेट निर्माण गरेको वडाध्यक्ष भण्डारीले वताए । प्रतिष्ठानले सचिव योजराज न्यौपानेलाई गेट वनाउने जिम्मा दिएको थियो । गेट पुर्वाधार कार्यालयले दिएको डिजाईन अनुसार निर्माण नभएपछि २ लाख ५८ हजार मात्र निकासा भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
गेटको शिलान्यासननै विवादित
गेटको शिलान्यास षडानन्द नगरपालिकाका मेयर विरवल राई र वडाध्यक्ष रामेश्वर भण्डारीले गएको ज्येष्ठ १० गते गरेका थिए । गेट शिलान्यास भईरहँदा जिल्लामै कोरोना भाईरसको दोस्रो लहरको ईपिसेन्टरको रुपमा रहेको नेपालेडाँडा रहेको थियो । नेपालेडाँडामा निर्माणाधिन चिर्खुवा हाईड्रो पावरका ३२ जना कामदारमा एकैपटक कोरोना भाईरस पुष्टि भएको थियो । कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने अवस्थामा गेट मेयर र वडाध्यक्षनै शिलान्यासमा लागेकोे भन्दै स्थानियले चर्को आलोचना गरेका थिए ।
गेटको तस्वीर ईडिट गरेर फेसवुकमा राखियो : वडाध्यक्ष भण्डारी
गेट निर्माण स्थल षडानन्द नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष रामेश्वर भण्डारीले गेटको तस्वीर ईडिट गरेर फेसवुकमा राखेर विवादमा ल्याईएकोका आक्रोस व्यक्त गरेकाछन् । उनले भने “२ वटा तस्वीर माथिल्लो भाग र तल्लो भागवाट खिचेर गेटको पिल्लर ठूलो सानो देखिने र माथिल्लो भाग नमिलेको देखिनेगरि ईडिट गरेर विवादमा ल्याईएको हो ।” उनले सेटिङ्ग नमिल्दा विम अलिकति निहुरिएकोले त्यस्तो देखिएकोहो प्लाष्टर गर्दा राम्रो देखिने उनको दावि छ ।
भीम उपाध्यायको व्यंगात्मक क्याप्सन…गाउँमा बत्ती मरु, गेट चै ख !
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा चर्चित फेसवुक प्रयोगकर्ता भीम उपाध्यायले समेत योगमाया स्वागत गेटको तस्वीर राख्दै गाउँमा बत्ती मरु, गेट चै ख ! भन्दै व्यंगात्मक क्याप्सन राखेकाछन् । उनको क्याप्सनले के वताउँछ भने गाउँमा विजुली बत्ति छैन गेट चै वन्यो । हो ! वास्तवमा सो वडामा १३ बर्ष अघि विजुलीको पोल गाडिएतापनि अधिकांस स्थानमा अहिले सम्म विजुली बत्ती वल्न सकिरहेको छैन् । उनको क्याप्सनले कुरुप गेट भन्दा उज्यालो बिजुली बत्ती पहिले आवश्यक रहेको संकेत गरेको देखिन्छ ।